ICC refferal: Need of the hour | Danya Wadi
»World News»ICC refferal: Need of the hour
Posted by danyawadi on March 12, 2018 in World News
ရိုဟင်ဂျာ ဂျိနိုဆိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ အိုင်စီစီမှ အချိန်အပိုင်းအခြားတခု အတွက် စောင့် ဆိုင်းလျက်ရှိ။
(ဆောင်းပါးရှင်မှာ CB Abrar သည် ဒက္ကားတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာ ဆက် ဆံရေး ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးနေသူ တဦး ဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေး မီက ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဘာလင်ကွန်ဖရင့် (27-02-2018) တွင် အကဲဖြတ်ဂျူရီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ် သည်။)
ရိုဟင်ဂျာ ဂျိနိုဆိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ အိုင်စီစီမှ အချိန်အပိုင်းအခြားတခု အတွက် စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိ။
(ဆောင်းပါးရှင်မှာ CB Abrar သည် ဒက္ကားတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာ ဆက် ဆံရေး ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးနေသူတဦးဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေး မီက ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဘာလင်ကွန်ဖရင့် (27-02-2018) တွင် အကဲဖြတ်ဂျူရီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ် သည်။)
← ရခိုင်​ဘုရင်​က တိပြုခဲ့​သော သဘောတူညီမှူ ၆ ရပ်ဟ
“ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီးကို တည်ဆောက် ကြသူများ” →
freemyanmarvcd.com | No. 1. Burmese Movie Provider
၂၀၁၂ အတွင်း လူသတ်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှု အများဆုံးဖြစ်
(အစ္စလာမ်ကောင်စီ၊ မ-မ-လ၊ မအဖ)တို့ရဲ့ သဘော ထားကြေညာ ချက်
ပင်စင်လစာများအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်
လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီး အရေးယူခံရတဲ့ သီရိလင်္ကာ ရေတပ် ဦးစီးချုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ မလေးရှားနဲ့ ပါကစ္စတန် ဆွေးနွေး
တမန်တော်နေ့ သမိုင်း အစဉ်အလာ
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြား
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့လက်တွဲဖို့ဆန္ဒ ရှိကြောင်း တရုတ် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်မှ ပြန်ဝင်လာသူ မရှိဟု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပြော
ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်ပို့ရေး ဆိုင်းငံ့
ကမ္ဘာကျော် လူဆိုးလူမိုက်ကြီး ဘိန်းဘုရင် အယ်လ်ချာပို ကို နယူးယောက်မှာ ရုံးတင် စစ်ဆေးပြီ
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ပိုနားလည်တယ်လို့ အမေရိကန် ဒုသမ္မတကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တုံ့ပြန်ပြော
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီယာလ် ရခိုင်ကိစ္စ ပြင်းထန်စွာပြောပြီ (အင်တာဗျူး)
ရိုဟင်ဂျာအရေး ကျူးလွန်သူတွေကို အပြည့်ဝ အရေးယူ ရေး အာဆီယံမူကြမ်းမှာ တောင်းဆို
၁၉၄၇ ခု ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက်၊ အောင် ဆန်း ဂျိန္နား သဘောတူ ညီ ချက်
ရိုဟင်ဂျာနှိပ်ကွပ်မှု ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဟု အမေရိကန်ဒုသမ္မတက ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို ပြော
AI နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဆု ပြန်ရုပ်သိမ်း
နေရပ်ပြန်လာမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကို မောင်တော ​ဒေသအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ပြုမည်
ဆော်ဒီဂျာနယ်လစ် အသတ်ခံရသည့် မှတ်တမ်း တိပ်ခွေ ကို တူရကီက နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ ကို ဖြန့်ဝေထား
RFA စကားဝိုင်း၊ “ဒုက္ခသည် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး နဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး”
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခေါ်ယူလိုကြောင်း ကနေဒါ ကမ်းလှမ်းချက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လက်မခံ
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မကိုင်တွယ်လျှင် ဈေးကွက်ဆုံးရှုံးရန် သေချာဟု EU ပြော
သက်သေ အထောက်အထား ဖျောက်ဖျက်မှု စွပ်စွဲချက် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် ပယ်ချ
အာမေရိကန်သို့ Suchiate မြစ် ကိုဖြတ်ကူး လာသော ဟွန်ဒူးရပ် ရွှေ့ပြောင်း အခြေချ လူအုပ်ကြီး
Lion Air လေယာဉ်ပျံ ပျက်ကျခြင်းမှ တစ် ယောက် တည်းသော ကံအကောင်းဆုံး လူသား
လုံခြုံရေးကောင်စီ တွင် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည် ကို တရုတ်နှင့် ရုရှား မတားနိုင်
အစိုးရပြောင်းလဲရုံ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပြောင်းတာ မဟုတ်
Former President Barack Obama campaigned for U.S. Senate candidate Jacky Rosen
မြန်မာကို ICC ပို့ဖို့ လူ့အခွင့်ရေး အဖွဲ့တွေ ပြောကြား
မြန်မာကို အရေးယူဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သမ္မတ တိုက်တွန်း
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံး ရှင်းလင်းမှုတွေ ရှိဆဲလို့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တင်သွင်း
ကုလအထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ဘာဂျီနာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မြန်မာကြိုဆို
အီးယူစေလွှတ်မယ့် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လာမည်
ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေး ဘင်္ဂလားဒေရှ် ဒုက္ခသည် စခန်း ခရီး (Video)
အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ တို့ မြန်မာ့ အရေး ကုလမှာ အစီရင်ခံ ကြမည်
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (531) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (16) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,357) သတင်းများ (12,231) သမိုင်း (431) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (361) အင်တာဗျူး(267) အစ္စလာမ်ဘာသာ (342) အထူးကဏ္ဍ (2,081) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (165) အထွေထွေ (38) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (207) ဆောင်းပါးများ (4,543) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (9) English Dictionary (3) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,564) Articles (748) Documents (96) History (261) Arakan History (194) Burmese History (57) M-M History (46) Scripts (5) World History (42) Interview (20) Laws (12) News (964) Breaking News (282) Local News (292) Open Letter (12) Other News (10) World News (554) Religious (37) Islamic (36) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (225) Introduction (5) Link (248) Movie (108) Other Dictionary (6) Photos (754) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (340) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month December 2018 (2) November 2018 (19) October 2018 (27) September 2018 (51) August 2018 (37) July 2018 (82) June 2018 (86) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)